Ku raaxayso heerka sare ee ganacsiga ee tignoolajiyada fikradda xirfadlayaasha | Qalabka Wararka
Ku raaxayso heerka ugu wanaagsan ganacsiga ee tignoolajiyada iyadoo la adeegsanayo ra'yiga xirfadlayaasha
Emilio Garcia | | General, Reviews
Ganacsiga maanta waxa uu inta badan ku jihaysan yahay astaamo badan oo aan ka heli karno deegaanka khadka tooska ah. Si kastaba ha ahaatee, ka baxsan suurtagalnimada helitaanka dhammaan noocyada alaabooyinka ama qandaraasyada adeegyo badan oo kala duwan oo online ah, Waxaa habboon in laga hadlo doorka fikradaha isticmaalayaasha kale ay u yimaadeen inay qabsadaan. Qiimayn taxane ah oo siinaya daahfurnaan maalgashi kasta oo aanu samaynayno. Dunida tignoolajiyada iyo qalabka elektiroonigga ah, tani waa xitaa mid aad u habboon, taas oo ka dhalatay saameynta dhaqaale ee iibsashada alaabooyinka xaaladdoodu liidato ama tayadoodu hooseyso.
1 Shirkadaha teknoolajiyada ayaa ku guuleysta suuqa
2 Doorka Gowork ee suuqa tignoolajiyada
Shirkadaha teknoolajiyada ayaa ku guuleysta suuqa
Haddii aan istaagno wax yar si aan u qiimeyno horumarka aan ku soo aragnay da'da dhijitaalka ah, waxaan isla markiiba ogaan doonnaa in aan wajahayno kacdoon bulsho oo cusub oo hoos yimaada calanka da'da dhijitaalka ah. Si aad u badan in ganacsiga tignoolajiyada uu u soo baxay mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee qaab dhismeedka ganacsigeena iyo hadda, mahadda fikradaha ku saabsan shirkadaha ganacsiga, Waxaan haysanaa fursad aan ku maalgashanno lacagteena kaliya dukaamada qiimaha leh. Qaab aan ku difaacno daacadnimadayada dhaqaale oo aan meel iska dhigno dhammaan khiyaamooyinka suurtagalka ah taas oo hareeraheena ka jirta.
Dhib ma laha haddii aan ka hadalno qalabka sida taleefannada casriga ah, kombayutarada, tablet-yada, taleefoonnada gacanta, qalabka guriga, qalabaynta guriga ama, tusaaleyaal kale oo badan, telefishin: Mid kasta oo ka mid ah alaabtan ayaa leh kharash aad u sarreeya oo had iyo jeer sahlan in la bixiyo. Si kastaba ha noqotee, qiimuhu maaha caqabad marka la maalgashanayo alaabtan, maadaama faa'iidooyinkoodu aad ugu fiican yihiin nolol maalmeedkeena oo aan ognahay inay u qalmaan. Haa runtii, Tani ma dhici doonto habkan haddii aynaan u tegin iibiyeyaasha ugu fiican ee suuqa elektiroonigga ah. Sababtoo ah iibsashada qalabka-dhamaadka hoose waxay saameyn xun ku leedahay pragmatism iyo waxtarka maalinlaha ah; isagoo og qofka la aamino marka laga jawaabayo heerka sare.
Halkaa marka ay marayso goobta Gowork online ayaa soo galaysa. Websaydhkan waxaa loogu talagalay macaamiisha iyo ganacsatada labadaba, iyo, labadaba iibsadayaasha iyo xubnaha shirkaddu waxay wadaagaan fikradahooda ku saabsan ganacsiga. Celceliska dhammaan qiimaynaha ayaa ina siinaya caddayn la taaban karo si aan horay u ogaano haddii maalgashiga aan dhigayno uu runtii u qalmo.. Sidan ayaa loo dhisay muuqaal hufan oo hufan oo soo saari doona qiimayaasha togan iyo kuwa taban ee shirkadaha qaybta ka ah Gowork.
Doorka Gowork ee suuqa tignoolajiyada
Waxaan horay u aragnay in Gowork ay tahay kheyraadka ugu habboon macaamiisha. Madal u adeegta sidii meel bannaan oo ah baadh adeegyo ama alaabooyin kala duwan oo aad u badan, adoo si faahfaahsan u falanqeeya qiimaynta kuwii hore u iibsaday. Si kale haddii loo dhigo, khalad kasta oo ka yimaada habka wax iibsiga waa la tirtiraa si loogu beddelo caddayn ganacsi: arrin muhiim ah oo ka jirta suuqa tignoolajiyada oo aynaan iska indho tiri karin.
Ogaanshaha doorkan, waxaa suurtagal ah in hal tallaabo hore loo qaado faa'iidooyinka ay Gowork siiso ganacsiga tignoolajiyada. Faa'iidooyin taxane ah oo loo qaybin karo laba dhagaystayaal oo kala duwan: kuwa loogu talagalay loo shaqeeyaha iyo kuwa loogu talagalay shaqaalaha. Marka hore, Gowork waxay ku dhiirigelinaysaa shirkadaha ku jira qaybta inay bixiyaan wixii karaankooda ah Oo markay sameeyaan, waxay leeyihiin sheegasho xayeysiis ah oo aan la mid ahayn: dib u eegis heer sare ah. Halka, marka ay wajahdo shaqaalaha, ay u furto meel aan la garanayn oo ay ku wadaagaan ra'yigooda iyo, marka lagu daro, Suurtagalnimada inaad hesho ganacsiyo tartan leh oo leh xaalado shaqo oo wanaagsan si aad horumar uga gaadho shaqadaada.
Markaa waxaa cad in Gowork ay si weyn uga qayb qaadanayso samaynta adduun wanaagsan xagga ganacsiga. Hab cusub oo lagu fahmo suuqa tignoolajiyada oo horeba u caddeeyey guusha mashruucan, natiijada kaydkeeda sii kordheysa iyo isticmaalayaasha badan ee ku soo biira goobta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Ku raaxayso heerka ugu wanaagsan ganacsiga ee tignoolajiyada iyadoo la adeegsanayo ra'yiga xirfadlayaasha
Xiaomi waxay dib u soo ceshataa xididadeeda waxayna higsaneysaa iibiyeyaasha ugu wanaagsan Redmi Note 11